Etu esi aghọ onye nrụpụta ngwa ekwentị | Martech Zone
Etu esi aghọ onye nrụpụta ngwa ekwentị
Tuesday, August 28, 2012 Adam Obere
Echere m na ngwa ihe nchọgharị ekwentị ga-agabiga ngwa ngwa - dị ka ngwa SaaS ejirila ngwanrọ desktọọpụ. Agbanyeghị, na nsogbu nzuzo, geolocation, swiping na ikike ndị ọzọ eji agagharị agagharị… ọ dị ka ngwa mkpanaka dị ebe a ịnọ. Ihe omuma a site na Lọ akwụkwọ.com kwupụta ọchịchọ na usoro otu gị nwere ike ịme iji bụrụ ndị mmepe ngwa ngwa.
Gartner buru amụma na site na 2015 oru mmepe ngwa ga eme karie ngwa PC site na 4 ruo 1. Ndị na-emepe ngwa ngwa Mobile na-erite uru nke 45 pasent afọ karịa afọ ọrụ uto, dị ka Bloomberg BusinessWeek si kwuo. Dice.com kọrọ a 100 percent abawanye na ọrụ ikenye maka mobile ngwa mmepe n'etiti 2010 na 2011.
Tags: infographicmobile ngwa mmepemobile ngwamobile ngwa ọdịnala
Achọghị m ịnụ Akụkọ Gị
GoodData: SaaS Na Nchọpụta Ọgụgụ Azụmaahịa